Surah Fatihah Ayah 1:1 M Abduh so | Quran
M Abduh in Somali
– M Abduh
1:1 Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.
1:2 Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).
1:3 Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.
1:4 Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).
1:5 adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).
1:6 ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).
1:7 Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.